त्यो क्षणको कल्पना गर्न चाहन्नन् -नम्रता | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← “Press Release” Nepalese Embassy Kuwait
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चको गठन →
त्यो क्षणको कल्पना गर्न चाहन्नन् -नम्रता
Posted on 01/07/2011 by नारायण नेपाल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
स्वरुप आचार्य- दुईवटा हिट सिनेमा र तीनवटा ट्रेजेडीकी नायिका नम्रताको व्यक्तित्व बोल्डनेस र ब्युटीको कम्बिनेसन हो। ‘बोल्ड र ब्युटिफुल’ सुन्दरीहरू आर्ट अफ सिडक्सनमा पोख्त हुन्छन्। अभिनेत्री नम्रतामा सम्मोहनको यो कलाकारिता भरपुर छ। यसलाई पारखीहरू खतरनाक कम्बिनेसन भन्ने गर्छन्। मादक मुस्कान, तिखो हेराइ, चालमा लचक, रोमान्टिक पहिरन र बौद्धिक सोचाइ- नम्रताको पहिचान यति नै हो। तर, सुन्दरीहरूमा यति गुण भएपछि त अरू के चाहियो र?
केही समयअघि नम्रताको पर्सनल स्टेटसलाई विवादमा तानियो। अर्कालाई दुःख दिएर रमाउनेहरूको भिडले उनको जीवनको नितान्त व्यक्तिगत पक्षलाई अनावश्यक ढंगले उचालेर उनको व्यक्तित्वमा हिलो छ्याप्ने प्रयत्न गर्‍यो। नम्रताको परिवार, आफन्त र शुभचिन्तकहरूका लागि यो साह्रै ठूलो मानसिक आघात थियो। तर, नम्रताले आफ्नो जीवनको यो ट्रेजेडीको सामना साहसपूर्वक गरिन्।
उनको यही साहसले उनलाई मनोरञ्जनको संसारमा एकपटक फेरि स्थापित गरिदिएको छ। उनको फाइटब्याक स्पिरिटले उनलाई अतीत बिर्सेर भविष्यतिर साहसिक पाइला चाल्न सक्षम बनाएको छ। त्यो घटनाको सम्झना मात्रैले पनि उनी अझै आहत हुन्छिन्। उनको अनुहार उदास देखिन्छ। उनी त्यो क्षणको कल्पनासम्म पनि गर्न चाहन्नन्। भन्छिन्, ‘आई डोन्ट वान्ट टु टक अर थिंक अबाउट इट। किनकि आई अलरेडी फेस् ड, ह्वाट आइ निड टु। फेरि यो कुरा निकालेर म मेरो परिवारलाई थप दुःखी बनाउन चाहन्न। ‘
उनी मिडियाको अनुत्तरदायी पक्षबाट अझै त्रसित छिन्। उनलाई मिथ्या वस्तुको रूपमा चित्रण गरेर ज-जसले त्यसको कमर्सियल युज गर्न खोजे, त्यसप्रति उनको गुनासो छ। किताब पढ्न निकै रुचि राख्ने नम्रतालाई हालै पढेको लीला नाइडुको किताब ‘प्याच वर्क अफ लाइफ ‘ले छोएको छ। ‘हु नोज् सम डे आई माइट राइट माइ भर्सन अफ स्टोरी माइसेल्फ। ‘ उनको यो अभिव्यक्तिमा दृढता र साहस छल्कन्छ।
अहिले नम्रता सबै कुरा बिर्सेर फेरि आफ्नो क्यारिअरलाई सलिड बेस दिनचाहन्छिन्। मनोरञ्जनको दुनियाँमा आफ्नो बेग्लै स्थानका लागि संघर्षगर्न चाहन्छिन्। उनी आफ्ना लागि इन्टरनेसनल प्लेटफर्मको खोजीमा छिन्।धेरै इन्टरनेसनल प्रोजेक्टबाट उनलाई अफर आएको छ। सबै कुरा फाइनलाइजभइसकेको छैन। त्यसैले अहिले उनी केही बताइहाल्ने मुडमा छैनन्।नम्रता म्युजिक पनि मुड अनुसारको सुन्ने गर्छिन्। नम्रता ‘मुडी ‘ छिन्। उनलाईमन नपरेको कुरा नभनेसम्म मुटु भित्रभित्रै जलन हुन्छ रे। ‘मेरो फ्रयाङ्कनेसलाईमान्छेहरू मुडी भन्छन्। आइ थिंक, आइ एम नट् मुडी। बट ओभर टु फ्रयाङ्क। ‘फिल्म, म्युजिक भिडियो र एडलाई उनको जीवनबाट पन्छाउने हो भनेपनि उनी एक सफल व्यवसायी हुन्।
केही साथीसँग मिलेर लाजिम्पाटमा खोलिएको उनको रेस् टुरेन्टले अहिले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। उनी त्यसमा निकै गर्व गर्छिन्। ‘एउटा खण्डहरजस्तो ठाउँलाई जसरी ‘एटिक ‘ मा रूपान्तरण गरियो, सम्झेरै पनि खुसी लाग्छ। ‘ बाल्यकालमै ‘संगिनी ‘ भिडियो फिल्ममा बाल कलाकारको भूमिका गरेर डेब्यु गरेकी नम्रताको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा छुट्टै पहिचान छ। नजिकबाट चिन्नेहरू उनलाई नेपाली फिल्म संसारकी पर्फेक्सनिस् ट भन्छन्। नम्रता फिल्म साइन गर्नु अगाडि फिल्मको स्क्रिप्ट राम्रोसँग पढ्छिन्। आफ्नो भूमिकाका ’boutमा स्पष्ट हुन्छिन्। त्यो फिल्ममा आफ्नो भूमिका फाइनल भएपछि मात्र फिल्म साइन गर्छिन्। यो वर्ष पनि उनले धेरै मेन स्ट्रिम फिल्ममा साइन गर्न अस् वीकारगरिन्। उनी चुजी छिन्। जोसुकै निर्माता-निर्देशकलाई नकार्न सक्छिन्।
तर, उनको यो इन्कारीलाई अर्कै अर्थ लगाउनेको कमी छैन। आलोचकहरू उनी स्क्यान्डलमा परेपछि उनलाई फिल्मको अफर नै आउन छाडेको दाबा गर्छन्। उनीहरूको दाबी असत्य साबित भैसकेकोछ। यद्यपि नम्रताले साह्रै कम नेपाली फिल्म खेलेकी छिन्। ‘सानो संसार ‘ र ‘मेरो एउटा साथी छ ‘ दुई यस्ता फिल्म हुन् जसले हाइफाइ भनाउँदा शहरिया युवालाई नेपाली फिल्म हेर्न हलसम्म तान्यो। ‘सानो संसार ‘ नेपाली फिल्म इन्डस् ट्रीको टर्निङ पोइन्ट हो। तर, त्यो टर्निङ पोइन्टलाई भने धेरै कमैले मात्र क्यास गर्ने कोसिस गरे।
नायिकाका रूपमा नम्रताको पहिलो फिल्म ‘सानो संसार ‘ सात महिनाको रिहर्सल र पूर्व तयारीपछि सुटिङ भएको थियो। त्यसैबाट नम्रता नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा आफ्नो छाप छाड्न सफल भइन्। त्यसको केही समयपछि आएको फिल्म ‘मेरो एउटा साथी छ ‘ उनलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने अर्को भेन्चर थियो। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नायिकाका रूपमा स् थापित भए पनि नायिका बन्ने कल्पना कहिल्यै गरेकी थिइन ‘, उनले बताइन्। स्कुलमा छँदा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा खुबै इन्भल्ब हुने नम्रताले त्यसैबेला खेलेको ‘एलिस इन् वन्डरल्यान्ड ‘ नाटकले उनी भित्र कलाकारिताको भूत जगायो। उनको सोच भने ‘चाइल्ड साइक्याट्रिस्ट’ बन्ने थियो। बाल मनोचिकित्सक बन्ने मनसायले उनले ±२ मा साइन्स पढिन्। तर, म्युजिक भिडियो, फोटो सुट, एड क्याम्पेनले उनलाई यति धेरै व्यस्त बनायो कि उनी आफ्नो रुचि परिवर्तन गर्न बाध्य भइन्। त्यसपछि उनले मिडियालाई नै आफ्नो करिअर बनाउने निधो गरेर मिडिया स्टडिजमा ब्याचलर्स् गरिन्। अहिले उनी नेपाली हिस्ट्री र सोसियोलोजीमा थप ब्याचलर्स गर्दैछिन्। नम्रताले आफ्नो स्कुले जीवनमा कहिल्यै बंक गरिनन्। पार्टी र डिस्को पनि गइनन्। उनी आफ्नो उमेरका साथीसँगीभन्दा आफूलाई निकै म्याचुअर फिल गर्थिन्।
उनलाई दिदी उमेरका साथीहरूसँग ह्याङगआउट गर्न रमाइलो लाग्थ्यो। स्कुले जीवनमा उनका केटीभन्दा धेरै केटा साथी थिए। उनी सम्झेर निकै रोमाञ्चित हुन्छिन् र हाँस्दै भन्छिन्, ‘मेरो केटाहरूसँग खुब पर्थ्यो। यतिसम्म कि म उनीहरूका लागि लभ लेटर पनि लेखिदिन्थें। धेरैलाई लभ लेटर लेखिदिएर केटी पट्याइदिएकी छु मैले। एकजना साथीलाई त फोनमै गफ गरेर ब्रेनवास गरिदिएँ र केटाको प्रपोजल एक्सेप्ट गर्ने बनाएँ। ‘
उनको पहिलो क्रसका ’bout प्रश्न सोध्दा भने उनी केही छिन् लजाइन्। त्यसपछि आएको उत्तरले माहोललाई रमाइलो बनाइदियो। ‘मेरो पहिलो क्रस भनेको आमिर खान हो। मलाई राम्रोसँग याद छ। म उनको धेरै ठूलो फ्यान थिएँ र छु। उनी एकपटक बिरामी भएको खबर सुनेपछि म उनलाई हर्लिक्स बोकेर भेट्न जान तयार भएको थिएँ। त्यतिखेर म धेरै सानो थिएँ। मेरी मामु अहिले पनि त्यो सम्झेर हाँस्नुहुन्छ। ‘ क्रसको प्रश्न छल्दै पहिले त उनले उम्कने प्रयास गरिन्, अन्ततः लजाउँदै भनिन् ‘ आइ नेभर ह्याड सच फिलिंग्स् फर माइ फ्रेन्डस्।
मलाई उनीहरू जहिले पनि बच्चाजस्तो लाग्थ्यो। आइ ह्याड क्रसओभर माइ टिचर। ‘ एकतर्फी प्रेमको त्यो पीडा उनले कक्षा नौमा पढ्दा भोगेकी थिइन्।सबैजनाको चासो नम्रताको अहिलेको रिलेसनसिप स्ट्याटसमा छ।
के हो त उनको अहिलेको स्टाटस? हाँस्छिन् र भन्छिन्, ‘आइ एम टोटली सिङ्गल येट नट रेडी टु मिङ्गल! आइ डोन्ट रियल्ली रियल्ली सी ए गुड म्यान हेयर। ‘ उनी अबको रिलेसनसिप स्टेबल होस् भन्ने चाहन्छिन्। नम्रता यस्तो प्रिन्स चार्मिङको पर्खाइमा छिन् जो परिपक्क र ह्यान्डसम होस् र उनको करिअरलाई इन्सपायर गर्न सकोस्। उनी भन्छिन्, ‘आइ वान्ट ए पर्सन विथ हुम आइ क्यान सेयर एभ्रिथिङ एन्ड बी माइसेल्फ। ‘ तीनपटक प्रेममा हार खाइसकेकी नम्रता फेरि हार भोग्न तयार छैनन्। ‘वास् तवमा तीन पटक अफेयरमा परियो। एउटाको खासै अर्थ छैन। कलेज डेज्मा साथीहरूको करकापले टु विक्स् लंग अफेयर चल्यो।
पछि मलाई नै धान्न यति गाह्रो भयो कि प्रिटेन्ड गर्नै सकिन। अनि लेटर लेखेर ब्रेक अप दिएँ ‘, उनी फेरि मस् तसँग हाँसिन्। नम्रतालाई अल्कोहोलको टेस्ट नै मन पर्दैन। तर, ‘टकिला सट ‘ मा भने खुब रमाउँछिन् उनी। ‘आइ एम ए सोसियल ड्रिंकर। बेलुका पार्टीमा सबैजना प्रायः झ्याप हुन्छन्। अलिकति टिप्सी भएन भने त कुरै मिल्दैन।’